Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Ilizwe | Ummandla » elamaDatshi » I-Netherlands yenza lula izithintelo ze-COVID-19 nanjengoko usulelo olutsha lusanda
NgoLwesihlanu, iNetherlands yabona irekhodi yemihla ngemihla yosulelo olutsha olungaphezulu kwe-35,000, nangona amagosa ezempilo esithi amazinga okulaliswa esibhedlele aye ehla.
Amagosa aseDatshi abhengeze ukuba ilizwe liza kukhulula ezinye zezithintelo eziqatha ze-COVID-19, kunye neendawo zokuzivocavoca, kunye neenwele kunye neesaluni zobuhle zivunyelwa ukuba zivulwe kude kube ngentsimbi yesihlanu ukusuka ngomso ukuya phambili.
Kwinkomfa yanamhlanje noonondaba, yelizwe Inkulumbuso uMark Rutte ibhengeze ukuba amashishini angabalulekanga azakuvunyelwa ukuba aphinde avulwe ngoMgqibelo, ngaphandle kwenani elikhulayo losulelo elamaDatshi .
"Sithatha inyathelo elikhulu kwaye oko kuthetha ukuba sithatha umngcipheko omkhulu," Rutte sitsho.
Amashishini kunye namaziko emfundo aphinda avulwe asaya kulawulwa yimithetho engqongqo yezempilo ye-COVID-19 egunyazisa ukwamkelwa kwamanyathelo afana nokungena ekuhlaleni kunye nokufihla ubuso.
Phakathi koqhanqalazo olusuka kula mashishini kuya kufuneka ahlale evaliwe, iibhari, iindawo zokutyela, iithiyetha kunye neekhefi azifakwanga kumyalelo omtsha kwaye kufuneka zihlale zivaliwe kude kube nguJanuwari 25. Kwakungekudala ukuba aphinde avule onke amashishini, Inkulumbuso uRutte sitsho.
Ezinye iindawo zokutyela kwi elamaDatshi sele idelele imiqathango yelizwe, ephakathi kwezona zinzima eYurophu. Abo baseValkenburg, kumazantsi elizwe, baphinde bavulwa kwangethuba ngentsikelelo kasodolophu wesixeko, kwaye uninzi lwabanye oomasipala bathembise ukuba baza kulandela kwezi ntsuku zizayo.
Amashishini amaDatshi ajongene nokuvalwa okungqongqo ukusukela ngoDisemba phakathi kokunyuka kwamatyala e-COVID-19. NgoLwesihlanu, i elamaDatshi sibone irekhodi yemihla ngemihla yosulelo olutsha olungaphezulu kwe-35,000, nangona amagosa ezempilo esithi amazinga okulaliswa esibhedlele aye ehla.
Oku ngakumbi: elamaDatshi | Covid-19
Ibango lenyama yexabiso eliphantsi liyenyuka
Abantu abaphila neLupus banobuncinci iOrgan enye enkulu...
Iinyanga ezintlanu zohambo lwaselwandle: Umhambi wase-Italiya uyakufika...
Bangama-27,000 abakhenkethi baseRussia abavaleleke phesheya emva kwenqwelomoya entsha...
London Cabbies: ITanzania yeyona Mfihlo iGqwesileyo